धनुषामा आफ्नै बाबु र श्रीमतीलाई हत्या गरी आँपको रुखमुनी पुर्ने पक्राउ| Corporate Nepal
धनुषामा आफ्नै बाबु र श्रीमतीलाई हत्या गरी आँपको रुखमुनी पुर्ने पक्राउ
भदौ ८, २०७८ मंगलबार १२:५०
धनुषा । आफ्नै वृद्ध बाबु र श्रीमतीलाई हत्या गरेको आरोपमा मिथिलाविहारी नगरपालिका ५ ललिया गाउँका एक युवक पक्राउ परेका छन् । बाबु र श्रीमतीलाई हत्या गरी घरदेखि करिव सय मिटर पर आँपको रुखमुनी खाल्टो खनी गाडेको आरोपमा ४० वर्षीय भागेन्द्रकुमार मण्डल पक्राउ परेका हुन् ।
उनले ५५ वर्षीय बुबा रामवृक्ष मण्डल र ३५ वर्षीया श्रीमती अमरिकादेवी मण्डलको हत्या गरी खाल्टो खनेर गाडेको धनुषा प्रहरीले जानकारी दिएको छ । आफ्नो बुबा र श्रीमती बेपत्ता भएको भन्दै मंगलबार बिहान छरछिमेकलाई खबर गरेपछि गाउँले खोजीकार्यमा लागेका थिए ।
त्यससै क्रममा आँपको रुखमुनी आलो माटो देखेपछि शंका लागेर स्थानीयले प्रहरीलाई खरेका थिए । प्रहरीले माटो निकाल्दा दुई जनाको शब फेला परेको हो । बिगत १० बर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेर केही महिनाअघि मात्रै फर्किएका भगेन्द्र किन बाबु र श्रीमतीको हत्या गरे ? भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाई छ । गाउँमा बाबु र आफ्नी श्रीमतीको अनैतिक सम्वन्ध रहेको हल्ला चलाइएकाले सोही आशंक र रिसमा उनले हत्या गरेको हुनसक्ने अडकल पनि गरिएको छ ।
नारायणहिटी दरबार संग्रहालयबाट श्रीपेच चोर्न खोज्ने पक्राउ
डा. भक्तमानलाई अपहरण गरी फिरौतीवापत एक करोड १० लाखको सुन लुट्ने ११ बर्षपछि पक्राउ
सेञ्चुरी बैंकको खातामा पैसा नभएको चेक दिने हिरालाल ललितपुरबाट पक्राउ